महिनावारीका बेला महिलालाई घर बाहिर जानु पर्दा निकै समस्या हुने गर्दछ । त्यसैले कतिपय महिला यस्तो बेला घर बाहिर निस्कन नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहाना राख्दछन् ।
Nepal Online Patrika| Kathmandu: महिनावारीका बेला महिलालाई घर बाहिर जानु पर्दा निकै समस्या हुने गर्दछ । त्यसैले कतिपय महिला यस्तो बेला घर बाहिर निस्कन नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहाना राख्दछन् ।
तर कार्यालयको काम, अध्ययन वा अरु कामका लागी बाध्यात्मक अवस्थामा घरबाहिर निस्कनु पर्ने हुन्छ ।
यस्तोमा घरबहिर निस्दा, कतै लामो समय बस्दा वा हिँडडुल गर्दा प्याड परिवर्तन गर्न संभव हुँदैन । त्यसैले महिनावारी भएको बेला घर बाहिर रहँदा यी सावधानी अपनाउनु पर्छ ।
१. ठुलो आकारको प्याड किन्ने:
बजारमा हरेक आकारको प्याड पाइन्छ । तर, सकेसम्म महिनावारीका बेला ठुलो अर्थात एक्स्ट्रा लार्ज आकारको प्याड नै प्रयोग गर्नु पर्दछ । लामो आकारको प्याडले बढि सोस्नुका साथै बाहिर दाग लाग्न दिदैन ।
२. नियमित प्याड फेर्ने:
कतिपय महिला प्याड जोगाउने नाममा एउटै प्याडले दिन कटाउँछन् । तर यो गल्ति नगर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईमा इन्फेक्सन खतरा बढ्न जान्छ । महिनावारीको पहिलो र दोस्रो दिन अनिवार्य रुपमा हरेक ३ घन्टामा प्याड फेर्न जरुरी हुन्छ ।
३. गुणस्तरीतामा ध्यान:
कतिपय महिला केहि थोरै रकम बचाउन सस्तो र गुणस्तरहिन प्याड किन्ने गर्दछन् । तर यस्ता प्याडले दाग लाग्ने सम्भावना मात्र होइन संक्रमणको जोखिम पनि बढाउँछ । त्यसैले प्याड किन्दा राम्रो र गुणस्तर नै किन्नु पर्दछ ।
४. छाला सुहाउँदो प्याड:
हरेक मानिसको छाला फरक फरक हुने भएकाले महिलाले प्याड किन्दा आफ्नो छाला अनुकुल भएको ब्राण्डको मात्र किन्नु पर्दछ । आफुलाई अनुकुल ब्राण्ड पहिचान गरेर नियमित सोहि ब्राण्ड मात्र प्रयोग गर्नुहोस् । यसले छाला चिलाउने समस्या रहदैन ।
५. सफा हुन आवश्यक:
महिनावारीका बेला नियमित नुहाउने, सफा सुग्घर हुन आवश्यक छ । महिनावारीको समयमा हुने सानो लापरबाहिले पनि रोग तथा संक्रमणको खतरा बढाउँछ । तसर्थ आफ्नो गोप्य अंगलाई राम्ररी सफा गर्न र नुहाउन आवश्यक हुन्छ ।
लसुनको प्रयोग गरि यसरी घटाउनुहोस् पेट:
लसुन एक प्राकृतिक एन्टी बायोटिक औषधि हो । यसले सुगरलाई नियन्त्रित गर्ने काम गर्छ लसुनमा पोषणतत्व ज्यादा हुनुका साथै यसमा क्यालोरीको मात्रा पनि निकै कम हुन्छ । लसुनले शरीरमा ती हर्मोनलाई सक्रिय गर्ने काम गर्छ जसले बोसोलाई जम्मा हुन दिँदैन । आफ्नो खानामा लसुनलाई समावेश गरेर हेर्नुहोस् । लसुन सेवन गर्दा सरीरमा भिटामिन ए, बी तथा सी का साथै आयोडिन, आइरन, पोटासियम, क्याल्सियम तथा म्याग्नेसियम जस्ता खनिज तत्वहरु समेत प्राप्त हुन्छ ।
यसरी परम्परागत घरेलु औषधिको रुपमा तथा आयुर्वेदिक औषधिको रुपमा प्रयोग हुदै आएको लसुनमा औषधीय गुण हुन्छ भन्ने कुरा एलोप्याथिक विशेषज्ञहरु पनि मान्दछन् । यसै कारणले गर्दा चिकित्सकहरुले विरामीलाई सन्तुलित भोजनको बारेमा सल्लाह दिँदा खानामा लसनुको प्रयोग फाइदाजनक हुने सल्लाह समेत दिन्छन् ।
कोरोना भाइरस9 mins ago
रोचक46 mins ago